မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်သွားဖွယ်ရှိတဲ့ Redmi S2
3 May 2018 . 5:24 PM
Xiaomi ဟာ မနေ့က ၄င်းတို့ရဲ့ Weibo Official Account ကနေပြီးတော့ “S” ကို Highlight လုပ်ထားတဲ့ ကြော်ငြာပုံတစ်ခုကို တင်လိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါကြော်ငြာဟာ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် Redmi S2 လည်းဖြစ်နိုင်သလို Xiaomi ရဲ့ ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက်သစ်ကိုယ်ပိုင် Chipset ဖြစ်တဲ့ Surge S2 Chipset လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ထွက်ပေါ်လာသည့် Xiaomi Teaser သစ်
ဒီကနေ့မှာတော့ “Surprise” ဆိုတဲ့စာလုံးပါတဲ့ ကြော်ငြာပုံတစ်ခုကို ထပ်တင်ခဲ့ပြီး ၄င်းပုံမှာတော့
“မေလ ၁၀ ရက်နေ့” ဆိုတဲ့ရက်အတိအကျကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နေ့မှာ Redmi S2 ကိုမိတ်ဆက်သွားမှာလား?
Xiaomi အနေနဲ့ 3C နဲ့ TENAA တို့မှာ Redmi S2 အတွက် Specification ကို မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသလောက်ရှိသလို လာမယ့် ၁၀ရက်နေ့မှာ တရုတ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် Suning Tesco ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Launch Event တစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာ Redmi S2 ကိုမိတ်ဆက်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။
Redmi S2 မှာ ပါဝင်နိုင်တဲ့ Specification တွေကတော့ 18:9 ရှိတဲ့ 5.99 လက်မအရွယ် HD+ Display၊ Snapdragon 625 SoC၊ Battery 3,080mAh၊ RAM 2GB၊ 3GB၊ 4GB နဲ့ Internal Memory 16 GB / 32 GB / 64 GB ဆိုပြီးရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Camera ကတော့ Dual Camer ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့ဘက် 16MP နဲ့ ကျောဘက် 12MP+5MP ပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ခုလက်ရှိအချိန်ထိတော့ ခန့်မှန်းသတင်းအနေနဲ့သာထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး Xiaomi အနေနဲ့ Redmi S2 မှာ Surge S2 ကို SoC အဖြစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုလာနိုင်မလားဆိုတာလည်း စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မလေ ၁၀ ရကျနမှေ့ာ မိတျဆကျသှားဖှယျရှိတဲ့ Redmi S2
Xiaomi ဟာ မနကေ့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ Weibo Official Account ကနပွေီးတော့ “S” ကို Highlight လုပျထားတဲ့ ကွျောငွာပုံတဈခုကို တငျလိုကျပါတယျ။ အဆိုပါကွျောငွာဟာ အသဈထှကျရှိမယျ့ Redmi S2 လညျးဖွဈနိုငျသလို Xiaomi ရဲ့ ဒုတိယမွောကျမြိုးဆကျသဈကိုယျပိုငျ Chipset ဖွဈတဲ့ Surge S2 Chipset လညျးဖွဈနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးသတငျးတှထှေကျပျေါနခေဲ့ပါတယျ။
ယနထှေ့ကျပျေါလာသညျ့ Xiaomi Teaser သဈ
ဒီကနမှေ့ာတော့ “Surprise” ဆိုတဲ့စာလုံးပါတဲ့ ကွျောငွာပုံတဈခုကို ထပျတငျခဲ့ပွီး ၎င်းငျးပုံမှာတော့
“မလေ ၁၀ ရကျနေ့” ဆိုတဲ့ရကျအတိအကကြိုပါ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ အဲ့ဒီ့နမှေ့ာ Redmi S2 ကိုမိတျဆကျသှားမှာလား?
Xiaomi အနနေဲ့ 3C နဲ့ TENAA တို့မှာ Redmi S2 အတှကျ Specification ကို မှတျပုံတငျထားပွီးသလောကျရှိသလို လာမယျ့ ၁၀ရကျနမှေ့ာ တရုတျအရောငျးကိုယျစားလှယျ Suning Tesco ကုမ်ပဏီနဲ့ပူးပေါငျးပွီးတော့ Launch Event တဈခုကိုပွုလုပျဖို့လညျးပွငျဆငျထားတယျလို့ဆိုပါတယျ။ အဆိုပါပှဲမှာ Redmi S2 ကိုမိတျဆကျဖို့သခြောသလောကျရှိနပေါတယျ။
Redmi S2 မှာ ပါဝငျနိုငျတဲ့ Specification တှကေတော့ 18:9 ရှိတဲ့ 5.99 လကျမအရှယျ HD+ Display၊ Snapdragon 625 SoC၊ Battery 3,080mAh၊ RAM 2GB၊ 3GB၊ 4GB နဲ့ Internal Memory 16 GB / 32 GB / 64 GB ဆိုပွီးရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Camera ကတော့ Dual Camer ပါဝငျလာမှာဖွဈပွီး ရှဘေ့ကျ 16MP နဲ့ ကြောဘကျ 12MP+5MP ပါဝငျမယျလို့ဆိုပါတယျ။
ခုလကျရှိအခြိနျထိတော့ ခနျ့မှနျးသတငျးအနနေဲ့သာထှကျရှိနတောဖွဈပွီး Xiaomi အနနေဲ့ Redmi S2 မှာ Surge S2 ကို SoC အဖွဈထညျ့သှငျးအသုံးပွုလာနိုငျမလားဆိုတာလညျး စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာဖွဈပါတယျ။